जिम्मेवार जुवा - पाउण्डस्लोट्स क्यासिनो
PoundSlots.com जिम्मेवार गेमि and र कम उमेरकाले जूवा खेल्न प्रति समर्पित हो, र जबरजस्ती बाध्यताको लागि।
PoundSlots.com एक जिम्मेदार खेल अनलाइन स्थापना समर्थन गर्दै यसको खेलाडीहरुलाई रमाईलो गेमि environment वातावरण प्रदान गर्न समर्पित छ।
यहाँ, तपाइँ हाम्रो खेलमा उपलब्ध जुवा, स्व सीमा र स्वयं बहिष्करण उपकरणको लतबाट बच्नको लागि जानकारी पाउनुहुनेछ।
तपाईं धेरै राष्ट्रिय र स्थानीय जुवा सहायता संगठनहरूको लागि सम्पर्क जानकारी र तपाईंको कम्प्युटरबाट जुवा साइटहरूमा पहुँच रोक्नको लागि विधिहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ तपाइँको पाउन्डस्लोट्स.कट मा आफ्नो खेल बानी बारे चिन्तित महसुस गर्नुहुन्छ वा यो पजको समय हो भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई सम्पर्क गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं ग्राहकupport@instantgamesupport.com छोटो अवधि वा लामो अवधिको लागि स्व-बहिष्कार अवधि जारी गर्न।
जुवा खेल्ने बानीबाट टाढा रहनुहोस्
हामी तपाइँलाई यो याद गर्न आग्रह गर्दछौं कि PoundSlots.com मा हामीले प्रदान गर्ने खेलहरू केवल अनलाइन मनोरन्जनको एक प्रकार हो। दुर्भाग्यवस, केहि खेलाडीसँग खेलको यस प्रकारको आदी हुन स्वभाव हुन सक्छ र त्यहाँ एक वास्तविक सम्भावना छ कि महत्वपूर्ण घाटा समयको क्रममा संकलन हुन सक्छ।
हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईंले यी तथ्यहरूलाई दिमागमा राख्नु हुन्छ:
हाम्रो अनलाइन खेलहरूमा भाग लिने मनोरञ्जनका लागि मात्र हो। खेलहरू धनी छिटो पाउन वा debtsण कवर गर्नको लागि तपाईंले अर्जित गर्नुभएको हुनसक्दैन।
अनलाइन खेलहरू अवसरमा आधारित हुन्छन्; त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी रणनीति वा विधि छैन जुन तपाइँले हाम्रो साइटमा जित्ने वचन दिनुहुन्छ।
तपाईलाई गुमाउनु भन्दा सहजै भन्दा बढि दांव नछाड्नुहोस्।
विश्वस्त हुनुहोस् कि तपाईं अनलाइन जुवामा भाग लिन चाहानुहुन्छ र छनौट पूर्ण तपाईंको हो, र तपाईंलाई साथीहरूले तपाईंलाई खेल्न दबाब दिँदैन।
तपाईंको घाटालाई 'पीछा' गर्न प्रयास गर्नबाट जोगिनुहोस्। पहिले नै तपाईंको घाटा फिर्ता पाउने आशामा बढी पैसा लगानी गरेर तपाईंले थप कोषहरू गुमाउन सक्नुहुन्छ।
अनलाइन जुवा खेल्दा तपाईं कति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भनेर ट्र्याक राख्नुहोस्। नियमित आधारमा तपाइँको खेलहरूको ईतिहास जाँच गर्नुहोस्।
तपाईं अनलाइन क्यासिनोमा कति समय खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भनेर पहिले नै परिभाषित गर्नुहोस्। व्यावहारिक सीमामा सहमत हुनुहोस् र उनीहरूमा टाँसिनुहोस्।
यदि तपाइँको अनलाइन खेल तपाइँको व्यक्तिगत जीवन र दायित्व को बाटो मा भइरहेको छ तपाइँ अरूलाई हुन सक्छ, तपाइँलाई जुवा संग एक समस्या हुन सक्छ। तपाईंको जुवा गतिविधिहरू अहिले रोक्नुहोस् र समाधानको बारेमा सोच्नुहोस्।
प्रत्येक खेलको नियमहरू सिक्नुहोस् तपाईंले तिनीहरूलाई खेल्नु अघि।
PoundSlots.com तपाईंलाई दर्ता गर्न दैनिक, साप्ताहिक र मासिक सीमा राशि छनौट गर्न अनुमति दिन्छ। रकमहरूमा निक्षेप, ब्याजरहरू र घाटाहरू समावेश छन् जुन तपाईं आर्जित गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। कुनै परिवर्तन तपाईको सीमाहरूमा पछि गर्न चाहानुहुन्छ तपाईले तिनीहरूलाई अनुरोध गरे पछि days दिन पछि प्रभावकारी हुनेछ। थपको रूपमा, तपाईं कति लामो समय खेल्नुहुन्छ भनेर समय सीमा पनि सेट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँको सीमा परिवर्तन गर्न, तपाइँ "खाता" मा जान सक्नुहुन्छ।
टाईमआउट एक यस्तो सुविधा हो जुन प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि तपाईं जूवा गर्न जारी राख्न चाहनुहुन्छ भने, तर यसलाई आफैंबाट टाढा छोटो अवधिको लागि प्रबन्ध गर्नुहोस्। टाइम-आउटको बखत, तपाईं आफूलाई समयको एक निश्चित रकमको लागि खेल्नबाट रोक्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो जिम्मेदार गेमि settings सेटिंग्समा तपाईंको टाइम-आउट अवधि सेट गर्न सक्नुहुन्छ, days२ दिन सम्म। वा तपाइँ तपाइँको अनुरोध इमेल मार्फत हाम्रो ग्राहक समर्थन लाई पठाउन सक्नुहुन्छ (ग्राहकupport@instantgamesupport.com).
तपाइँ कुनै निश्चित वा अनिश्चित समयका लागि सेवाहरूको प्रयोगबाट आफूलाई अलग गर्न सक्नुहुन्छ (वा, यदि तपाइँको खाता कम्पनीको जुवा आयोग अनलाइन जुआ इजाजतपत्र द्वारा विनियमित छ - छ महिना देखि १२ महिना बीचको न्यूनतम अवधिको लागि - एकको लागी तपाइँ द्वारा विस्तार योग्य) वा कम्तिमा six महिनाको अधिक अवधिहरू)) ग्राहक ईन्टरफेसमा जिम्मेवार गेमिंग सेक्सन मार्फत वा हाम्रो ग्राहक समर्थनलाई सम्पर्क मार्फत मार्फत (ग्राहकupport@instantgamesupport.com), तपाईंको कम्पनीलाई प्रदान गरिने निर्णय बमोजिम। तपाईंको आत्म-बहिष्कार अनुरोध पुष्टि गर्नु अघि, तपाईंलाई स्वयं बहिष्कारको परिणामहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गरिनेछ। यदि तपाईं स्वयं बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्नुपर्दछ, हामी तपाईंलाई प्रोत्साहन गर्दछौं तपाईंको स्वत: बहिष्करणलाई तपाईंले हाल प्रयोग गर्नुभएको अन्य टाढाका जुवा अपरेटरहरूमा। तपाइँको आत्म-बहिष्करणको समयमा कुनै पनि निर्धक्क दांव सामान्य तरीका अनुसार व्यवस्थित हुनेछ, सामान्य टाइमस्केल्स अनुसार, र यदि लागू भएमा, तपाइँलाई जितेको पैसा। कुनै पनि आत्म-बहिष्कार खाता ब्लकहरू सहमति गरिएको स्वयं बहिष्करण अवधिको अवधिमा पूर्ववत गर्न सकिदैन।
यदि तपाईं स्व-बहिष्करणको विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं GAMSTOP सँग दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। GAMSTOP एक नि: शुल्क सेवा हो जसले तपाईंलाई ग्रेट ब्रिटेनमा इजाजतपत्र प्राप्त सबै अनलाइन जुवा कम्पनीहरूबाट स्वयं बहिष्कृत गर्न सक्षम गर्दछ। अधिक पत्ता लगाउन र GAMSTOP का साथ साइन अप गर्न कृपया भ्रमण गर्नुहोस् www.gamstop.co.uk .
तपाईं जिम्मेवार गेमिंग स्क्रिन मार्फत वास्तविकता चेक टाइमफ्रेम सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक सेट भएपछि, तपाईंले उही सत्रको बीचमा खेल खेल्न सुरू गरेदेखि यो समय स्क्रिनमा देखा पर्नेछ ("टाइमकाउन्ट")। एकचोटि टाइमकाउन्ट वास्तविकता चेक टाइमफ्रेममा पुग्नुहुनेछ जुन तपाईंले सेट गर्नुभयो, तपाईंलाई सोही सत्रमा खेलहरू जारी राख्नबाट रोकिनेछ जबसम्म तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्न कि तपाईं खेलहरू जारी राख्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाइँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाइँ खेलहरू जारी राख्न चाहानुहुन्छ, अर्को वास्तविकता चेक रिसेट नभएसम्म टाइमकाउन्ट, र माथिको प्रक्रिया पुनः शुरू हुनेछ। नयाँ सत्र सुरू गर्नाले टाइमकाउन्टलाई पनि पुनःसेट गर्न सक्छ। कुनै पनि समय, तपाईं परिवर्तन र / वा वास्तविकता चेक समयसीमा रद्द गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यस्ता परिवर्तन वा रद्द तुरून्त लागू हुनेछ (र परिवर्तनको मामलामा - टाइमकाउन्ट रिसेट हुनेछ)।
जुवा लतका साथ सहयोग गर्नुहोस्
तल संगठनहरूको सूची छ जुन तपाईंलाई जुवा मुद्दाहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईंको क्षेत्र सूचिमा वा तपाईंको परिवार डाक्टर वा सांस्कृतिक केन्द्र मार्फत स्थानीय संगठनहरूको खोजी गर्न यसको लागि यो लायक छ:
फोन: ०२० 2080०१ 1०००
जुवाडे बेनामी https://www.gamblersanonymous.org.uk
परामर्श सेवाहरु http://www.counselling-directory.org.uk/gambling.html
गोर्डन हाउस संघ https://www.gamblingtherapy.org
Cumbria मदिरा र औषधि सल्लाहकार सेवा (CADAS) http://cadas.co.uk/
उत्तर पूर्वी लतमा परिषद (NECA) http://neca.co.uk
विकल्पहरू - साउथेम्प्टन वेब: http://www.optionscounselling.co.uk/
इन्टरनेट फिल्टरिtering सफ्टवेयर
गेमि sites साइटहरूमा पहुँच रोक्नको लागि महत्त्वपूर्ण उपकरण भनेको इन्टरनेट फिल्टरि software सफ्टवेयर हो। यदि तपाईं गेमि sites साइटहरू प्रयोग गर्न तपाईंको घरमा प्रयोगकर्ताहरूलाई रोक्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं तल सूचीकृत कार्यक्रमहरू मध्ये एकमा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी PICS र ICRA लेबलहरू हाम्रो साइट पृष्ठहरूमा प्रदर्शित गर्दछौं कि यो प्रचार गर्नको लागि कि हाम्रो वेबसाइट अनलाइन जुवाको लागि हो। इन्टरनेट फिल्टरहरूले यी लेबलहरू लिन सक्दछन् र तपाईंको कम्प्युटरमा प्रयोगकर्ताहरूलाई हाम्रो साइटहरूमा प्रवेश गर्नबाट प्रभावकारी रूपमा रोक्न सक्छन्। माइक्रोसफ्टको इन्टर्नेट सामग्री सल्लाहकार यी लेबलहरू पढ्न सक्षम छ। अधिक जानकारी को लागी, कृपया भ्रमण गर्नुहोस् https://www.fosi.org/icra.
साइबर गश्ती - https://www.cyberpatrol.com
कम उमेरका जुवा कडा निषेध गरिएको छ। तपाईं १ live (१)) बर्ष भन्दा बढी उमेर वा कानुनी उमेर भन्दा बढी हुनुपर्दछ जुन तपाईं बसोबास गर्ने देशको कानूनले निर्धारण गरे अनुसार (जुन जुन ठूलो हो)।
हाम्रा सबै खेलाडीहरू कानुनी उमेरका छन् भनेर सुनिश्चित गर्न हामी उपयुक्त उमेर प्रमाणीकरण जाँचहरू गर्छौं। यदि मामलामा, हामी प्लेयरको उमेर प्रमाणित गर्न असक्षम छौं हामी कानूनी उमेरको हो भनेर पुष्टि गर्न हामी थप जानकारी सोध्ने छौं। उमेरको सन्तोषजनक प्रमाण प्रदान नभएसम्म खाताहरू निलम्बन गर्न सकिन्छ।
अभिभावकीय नियन्त्रणहरू तपाईंको बच्चालाई अनलाइन सुरक्षित राख्नको लागि एक महत्त्वपूर्ण तरिका हो। अभिभावकीय नियन्त्रणहरू धेरै जसो इन्टरनेट सक्षम गरिएका यन्त्रहरूमा कम्प्युटरहरू, स्मार्टफोनहरू, ट्याबलेटहरू र गेमि systems प्रणालीहरू सहित उपलब्ध छन्। अभिभावकीय नियन्त्रणहरूले तपाइँको बच्चालाई अनौंठो सामग्री सामना गर्ने जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ जब तिनीहरू अनलाइन छन्:
नेट नानी - उनीहरूको बच्चाको कम्प्युटर गतिविधि निगरानी र नियन्त्रणको तरीकाको रूपमा अभिभावक तिर मुख्य रूपले विपणन गरिएको सामग्री-नियन्त्रण सफ्टवेयर प्रदान गर्दछ। वेबसाइट हेर्नुहोस्: www.netnanny.com
Qustodio - नि: शुल्क संस्करण वरिपरि सबैभन्दा व्यापक अभिभावकीय नियन्त्रण अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो, तपाईंलाई नियमहरू र समय तालिकाहरू सेट गर्न सक्षम गर्दै। वेबसाइट हेर्नुहोस्: www.qustodio.com